Ngoobani Abangabahlobo BakaThixo?
UYesu Kristu nguNyana kaYehova noyena mhlobo wakhe usenyongweni. Ngaphambi kokuba aphile njengomntu emhlabeni, uYesu wayephila ezulwini njengesidalwa somoya esinamandla. (Yohane 17:5) Wandula ke weza emhlabeni ukuze afundise abantu inyaniso ngoThixo. (Yohane 18:37) Wanikela nangobomi bakhe njengomntu ukuze asindise uluntu oluthobelayo esonweni nasekufeni. (Roma 6:23) UYesu ngoku unguKumkani woBukumkani bukaThixo, urhulumente wasezulwini oya kuzisa iParadesi emhlabeni.​—ISityhilelo 19:16.
Neengelosi zingabahlobo bakaThixo. Iingelosi azizange ziqalise ukuphila ubomi bazo njengabantu emhlabeni. Zadalwa ezulwini ngaphambi kokuba uThixo enze umhlaba. (Yobhi 38:4-7) Kukho izigidi zeengelosi. (Daniyeli 7:10) Aba bahlobo bakaThixo basezulwini bafuna ukuba abantu bafumane inyaniso ngoYehova.​—ISityhilelo 14:6, 7.
UThixo unabo abahlobo nasemhlabeni; ubabiza ngokuba ngamangqina akhe. Ingqina enkundleni lichaza oko likwaziyo ngomntu othile okanye into ethile. AmaNgqina kaYehova axelela abanye ngoko akwaziyo ngoYehova nangeenjongo zakhe. (Isaya 43:10) Njengeengelosi, amaNgqina afuna ukukunceda ufumane inyaniso ngoYehova. Afuna ukuba nawe ube ngumhlobo kaThixo.
Ngaba Iingelosi Zinokusinceda?
Ngaba sifanele sithandaze kwiingelosi sicela uncedo?
Funda ngezizathu ezithathu ezibangela sisebenzise eli gama.